Xa uhamba uye eKhanada , kukho imithetho ejikeleze oko uvumelekile ukuba ungenise nakwilizwe.
AmaKhandi abuyela ekhaya makaxelele nayiphi na impahla ayithenge okanye ayifumaneka ngaphandle kwelo lizwe. Oku kubandakanya izinto ezifana nezipho, amabhaso, kunye namabhaso, kuquka izinto eziza kuthunyelwa kamva. Nantoni na ethengiweyo kwivenkile yaseKhanada okanye ngaphandle kwamalungelo esitokethi kufuneka ipapashwe.
Umgaqo omhle wesithupha xa ubuyela eCanada ngokusebenzisa amasiko: Ukuba awuqinisekanga ukuba akukho nto kufuneka ivakaliswe, kungcono ukuyivakalisa kwaye uyicacise nabasebenzi bomda.
Kuya kuba nzima kakhulu ukuhluleka ukuvakalisa into efunyanwa ngamagosa kamva. Amagosa angathatha nayiphi na impahla engeniswe ngokungekho mthethweni eCanada kwaye, ukuba ubanjwe, uya kujongana nezigwebo kunye neentlawulo. Ukuba uzama ukuzisa isibhamu okanye esinye isixhobo eCanada ngaphandle kokumemezela, unokujamelana neentlawulo zobugebengu.
Ukuzisa imali eKhanada
Akukho mida kumlinganiselo wemali abahambi abangenayo okanye abaphume eCanada. Nangona kunjalo, ixabiso leedola ezili-10 000 okanye ngaphezulu kufuneka lichazwe kumagosa amasiko kummandla waseCanada.
Nabani na ohluleka ukubika imali ye-$ 10,000 okanye ngaphezulu angayifumana imali eyabanjwe, kwaye abhekane nesohlwayo phakathi kwe-$ 250 kunye ne-$ 500.
Ukuba uphethe i-R10 000 okanye ngaphezulu ngemali-mali, amanqaku asebhanki asekhaya nakwamanye amazwe, iziqinisekiso ezifana nokuhlolwa kwabahambi, iimpahla, kunye nezibophelelo, kufuneka ugcwalise iMali-yoMgaqo-mali okanye iMali-mali yeNgxelo- Ifom ye-E677 nganye .
Ukuba imali ayiyiyo eyakho, kufuneka ugcwalise ifom ye-E667 yeMali- yeNgqungquthela yeMali okanye iNkcazo yeeMali -Jikelele. Ifom kufuneka isayinwe kwaye ihanjiswe kwigosa lezithethe ukuze lihlaziywe.
Iifom ezigqityiweyo zithunyelwa kwiiNkcitho zeMali kunye neNgxelo zeCandelo loCalulo loLwazi lweCanada (i-FINTRAC) yovavanyo nokuhlalutya.
Abangewona amaKhandi aKhenkethi eKhanada
Nabani na ozisa izinto eCanada kufuneka azivakalise kwigosa lomda. Lo mgaqo usebenza kwimali kunye nezinye izinto zexabiso lemali. Ingcamango enhle yokuba neengcamango ezithile zokutshintshiselwa kwexabiso kuba inani elincinci elifunekayo ukuba livakaliswe yi-$ 10,000 kwiidola zaseKhanada.
Ukuxolelwa kobuqu kubantu ababuyela eCanada
Abemi baseCanada okanye abahlali bexeshana babuyela eCanada ukusuka eluhambeni ngaphandle kwelizwe kunye nabahlali baseCanada ababuyela ekhaya behlala eCanada bangafanelekela ukuxolelwa ngabanye . Oku kuvumela ukuba bathathe ixabiso elithile lempahla eCanada ngaphandle kokuhlawula imisebenzi eqhelekileyo. Baya ku funeka bahlawule imisebenzi, irhafu kunye nayiphi na iiphononongo zephondo / intsimi kwixabiso lempahla ngaphezu kokukhululwa komntu.
Imiba ezayo kwiBorder
I-Arhente yeeNkonzo zeCanada yaseCanada igcina irekhodi lokuphulwa. Abahambi bangena eKhanada kwaye bahlakulela irekhodi yezophulo-mthetho bangaba nemiba yokuwela umda kwixesha elizayo kwaye banokuxhomekeke kwimviwo epheleleyo.
Iphulo: Indlela efanelekileyo kakhulu yokungena kumntu osele eKhanada, nokuba ungummi okanye awukho, kufuneka ukuba ufumane iinkcukacha zakho zokuhamba kunye neendlela zokuhamba. Thembeka kwaye ube nomonde, kwaye uya kuba sekho ngokukhawuleza.
I-LIGO - I-Interferometer yeLerfact-Wave Observatory
Amazwi kaNyana kaBawo oMnandi